TIMVIVER FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2020
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịjikọ ọsọsọ na kọmputa dịpụrụ adịpụ, mgbe ahụ TeamViewer ga-enyere gị aka. N'ihi ọrụ ya, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ijikwa kọmputa, mana ị na-ebufekwa faịlụ ma nye ndị ọrụ ndụmọdụ na ụlọ ọrụ nkata.
Ihe omumu: otu esi abanye na komputa
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ maka njikọ dịpụrụ adịpụ
TeamViewer bụ ngwá ọrụ dị mfe na nke a na-apụghị imetuta na-enye nhazi kọmputa. Ọrụ ya gụnyere ma nbudata faịlụ na ọrụ mmekọrịta mmekọrịta maka ihe omume dị otú a, yana ndị ọzọ, n'etiti nke enwere ntọala njikọ na oku na ekwentị.
Ma, ihe mbụ na mbụ.
Njikwa nlekọta ntanetị
Ọrụ nlekọta nchịkwa ma ọ bụ ọrụ nchịkwa bụ ọrụ bụ isi nke usoro ihe omume ahụ. N'ebe a, TeamViewer na-enye njikọ dị nchebe na kọmputa dịpụrụ adịpụ ma nye onye ọrụ ya niile ngwaọrụ ndị dị mkpa maka ijikwa kọmputa.
Njikọ na kọmputa nwere ike ime na ụzọ abụọ - njikwa na mbufe faịlụ.
Ọ bụrụ na ọnọdụ mbụ onye ọrụ nwere ike ijikwa kọmputa dịpụrụ adịpụ dị ka nke aka ya, mgbe ahụ na nke abụọ, a ga-enye ya ohere naanị ịgbanwe faịlụ.
Na ngwa TeamViewer, enwere ohere mara mma - ihe okike nke nzukọ. N'ihi ọdịdị a, ị nwere ike ịmepụta ma mepụta nzukọ nke gị ma jikọọ ndị dị.
N'ihi ogbako ahụ, ọ bụghị nanị na ị ga-ekwurịta okwu na ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ (ọzọ, na onye ọ bụla n'otu oge), ma jidekwa ihe ngosi dị iche iche.
Njirimara ndepụta Onye ọrụ
Ka ị ghara icheta ID nke kọmputa dịpụrụ adịpụ n'oge ọ bụla, enwere ndepụta dị mma nke ndị ọrụ na TeamViewer.
Ọdịdị ya yiri ọtụtụ ndị ozi ozugbo, n'ihi ya, iji ya eme ihe dị nnọọ mfe. Maka mma, enwere ọtụtụ njirimara na-enye gị ohere ịmepụta ọ bụghị nanị na ịmepụta kọntaktị ọhụrụ, kamakwa ịmepụta otu ọrụ dị iche iche.
Ọzọkwa, ma maka otu na ndị na-ahụ maka ndị ọrụ, ị nwere ike ịtọ ntọala njikọ. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ịtọ ntọala maka otu, a ga-eji ha maka ndị ọrụ niile nke otu a.
Mmekọrịta nkwurịta okwu
Ọrụ nkwukọrịta bụ otu n'ime ọrụ ndị dị na njikwa akara ngosi. N'ebe a, a na-enye onye ọrụ ọrụ dị iche iche nke nwere ike iji mee ka ya na onye ọrụ kọmputa dị na ya kwurịta okwu.
Na mgbakwunye na nkata ahụ a wuru, site na ebe a ị nwere ike ịkpọ oku site na telifon na njikọ Ịntanetị.
Ile ọrụ anya
Iji ọrụ "View", ị nwere ike idozi ọnụ ọgụgụ nke windo kọmputa dịpụrụ adịpụ, àgwà oyiyi, na ọbụna setịpụ mkpebi maka nlekota anya.
N'iji ngwaọrụ ndị a, ịnwere ike ịmepụta echiche dị mma nke windo, nke a bara uru karịsịa mgbe ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ njikọ n'otu oge ahụ.
Ihe ndekọ na mgbakwunye
N'ebe a, TeamViewer na-enye onye ọrụ ọrụ ọ bụghị naanị maka ịnyefe faịlụ, kamakwa maka ịmepụta nseta ihuenyo, nchekwa faịlụ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
N'ihi ngwá ọrụ nke arụ ọrụ, TeamViewer na-enye ndị nlekọta dị mfe nke kọmputa dịpụrụ adịpụ.
N'ebe a, ị nwere ike ịkwụsị oge ma ọ bụ kpọọ onye ọrụ ọhụrụ. Ọ na-emekwa ka ịpị Ctr + Alt Del key combination, malitegharia kọmputa dịpụrụ adịpụ, ma mechie ndekọ nke ugbu a.
Ngwakọta nke usoro ihe omume ahụ
Njikọ zuru ezu na Russia
Nnukwu atụmatụ setịpụrụ
Ikike ịmepụta mkparịta ụka
Ndepụta njirimara nke bara uru
Cons nke usoro ihe omume
Akwụsịghị ikikere ikike
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwu na TeamViewer bụ otu ngwaọrụ kachasị mma maka nchịkwa nchịkwa. O nwere ihe niile ịchọrọ iji chịkwaa kọmputa dị na kọmputa ahụ dị mma ma dị mma. Na ekele maka njirimara ndị ọzọ, ọtụtụ ọrụ nke TeamViewer dị ukwuu.
Download TimViver Trial
Ijikọ na kọmputa ọzọ site na TeamViewer Esi tinye TeamViewer Otu esi eji TeamViewer Ịtọ ntọala na-agbanwe agbanwe na TeamViewer
TeamViewer bụ otu n'ime ihe omume kachasị ewu ewu maka ịnweta kọmputa. Enwere ike igosi desktọpụ gị na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Onye Mmepụta: TeamViewer GmbH
Akwụ ụgwọ: $ 230